Sony na-eme FES Watch U onye ọrụ ya na ngosipụta kọmputa elekere abụọ | Akụkọ akụrụngwa
Sony ekpughere n'ime awa ndị na-adịbeghị anya, n'ime mmemme mmemme nke Flight First Flight mbụ ya, a mbipute ọhụrụ nke ihe ịga nke ọma smartwatch FES Watch, nke o mere baptizim n’oge a ka FES Lelee U. O meela ya na vidiyo nkwado nke ị nwere ike ịhụ n'elu nke isiokwu a na nke ị ga - ahụ elele uru niile nke ngwaọrụ a nwere igwe ihe ntanetị elektrọnik abụọ.
Nke a bụkwa isi ihe dị iche ma e jiri ya tụnyere ụdị nke mbụ, nke nwekwara igwe kọmputa kọmputa. FES Watch U a nwekwara ihuenyo nke abụọ, nke ejiri ink kọmputa mee, nke na-eme dị ka eriri ma na-enye anyị ohere ịgbanwe atụmatụ mgbe niile.
Ugbu a Sony ekwuputala na ọ ga-adị na agba atọ dị iche iche; ojii, ọla ọcha na ọcha, ụdị niile bụ ihe na-enweghị mmiri site na asambodo IPX5 / IPX7. Njikwa obodo ya ga-eru ihe ruru izu 3 n'ihi eziokwu ahụ bụ na enyo abụọ ọ na-etinye bụ nke ink kọmputa nke oriri ya pere mpe.
Na mgbakwunye, dị ka ụlọ ọrụ ndị Japan kwadoro, batrị a na-akwụ ụgwọ n'ụzọ zuru oke n'ime ihe karịrị awa abụọ na nke a na-eme na ikuku, ihe na-enweghị mgbagha ọ bụla dị mma.
Ọ bụrụ na dị ka anyị ka ị daa na ịhụnanya nke a FES Watch U, anyị nwere akụkọ ọjọọ maka gị na nke ahụ bụ maka oge ọ ga - ere naanị na Japan ma dabere na ihe ịga nke ọma nke usoro ego, ọ nwere ike iru mba ndị ọzọ. Sony ekwenyebeghị ọnụahịa ya nke mbụ n'oge ahụ, agbanyeghị na-eche na e gosipụtara ụdị izizi ya na euro 260, a ga-eche na ọ ga-enwe ọnụahịa yiri ya.
Kedu ihe ị chere maka Sony FES Watch U ọhụrụ a..
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Sony na-eme FES Watch U onye ọrụ nwere ngosipụta e-ink abụọ
Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọrụ gọọmenti na nche dị njọ ngwụrọ la.
Samsung Galaxy Note 7 na 6GB / 128GB ga-ada ahịa n'oge na-adịghị anya, a ga-akwụ ụgwọ ya na euro 936